စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ - Bezzia | Bezzia
အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုအလွန်အလေးထားကြသည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့တည်ရှိနိုင်သည် ပြည်တွင်းရေးပြproblemsနာများ လူတစ် ဦး ၏တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြိုလဲစေသောကြောင့်မိဘများ၊ လက်တွဲဖော်နှင့်အတူပြstudiesနာများ၊ လေ့လာမှုများ၊
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းအရာများအတွက်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။ စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲ, သူသည်ဤပြfromနာများမှခံစားနေရသောမိန်းကလေးငယ်များကိုကူညီပြီးမည်သည့်အရာကမှကျွန်ုပ်တို့မမြင်ဖူးသောအရာများကိုမြင်အောင်ကူညီပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပညာရှင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသသော်လည်းသင်သည်ပြင်းထန်သောရောဂါခံစားနေရလျှင်သင်ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးအစားသို့သွားရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော် Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခြေအနေမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သင့်အားကူညီမည့်အကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။
အချစ်က ဦး နှောက်အပေါ်ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိလဲ
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတွေ့ဖို့နဲ့အဲဒါကိုခံစားဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မလွယ်ပါဘူး။ ကံထူးတဲ့သူတွေ ...
စိတ်နေစိတ်ထားသည် Single အမျိုးအစားကိုဖော်ပြသည်
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
သေချာတာကတော့ဒီစကားကမင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အသံပဲ။ ဒီနေ့လူအများကြီးရှိတယ် ...
စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နှင့်အမျှလက်တွဲလျက်ရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကအမြဲရှိနေပြီးငါတို့စကားပြောတာကိုနားထောင်တာ ...
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်အချိန်တိုင်း၊ လူနှစ် ဦး ကြားမှချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ရှာဖွေမှုအပေါ်အခြေခံသည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲမသေချာဘူးလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကအရမ်းလွယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ...
ပြီးပြည့်စုံသောလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်သူ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအရွယ်ရောက်သူတိုင်းတောင့်တသောအရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ…
ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ကဘာကိုမှမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ပေးတတ်တယ်လို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ သို့သော် ... အဲလူတွေရှိသေးတယ်။